Sida loo jeclaado mukulaasha | Bisadaha Noti
Sida loo jeclaado bisad
Bisadu waa xayawaan la yaab leh oo kuu oggolaanaya adiga oo keliya inaad ogaatid, laakiin sidoo kale inaad naftaada ogaato. Waad ku mahadsan tahay shirkadooda, nadiifiyeyaashooda, xitaa waxay ku mahadsan yihiin qoraalladooda oo naga dhigaya inta badan, waan karnaa ku raaxayso saaxiibtinimo saafi ah oo run ah iyada oo loo yaqaan 'feline' oo nala socotay muddo ku dhow 9500 sano.
Si kastaba ha noqotee, marwalba xiriir aad u wanaagsan nagama dhexeyn iyaga. Qarniyadii dhexe ee Yurub waxaa lagu gubay meesha dusheeda maxaa yeelay waxaa la rumeysnaa inay yihiin kuwa xambaara cudurka, in kasta oo waqtiga la soo dhaafay, hadana maanta waxaa jira dad doorbida inay ka fogaadaan xayawaankan qaaliga ah, ama laga yaabo inayna aqoon sida bisadda loo jeclaado. Iyaga, iyo sidoo kale adiga haddii aad horeyba ugu nooshahay mid dhogor leh, qodobkan ayaa socda.
Marka hore, dheh anigu sinaba khabiir uma ihi bisadaha. Anigu ma ihi dhakhtar xoolaha, cilmiga anshaxa iyo tababaraha, laakiin waxaan la noolaa bisadaha ilaa iyo 10 jirkaygii (waxaan dhashay 1988). Bisado badan ayaa noloshayda soo maray, runtiina qaar kaloo badan ayaa dhaafi doona maxaa yeelay waxaan jeclahay daryeelkooda iyo wax ka barashadooda.
Taasi waxay tiri, hada aan u degno ganacsiga.
1 Sidee loo tusaa bisadaada sida aad ujeceshahay isaga?
1.1 Waa maxay baahiyaha aad qabtaa?
1.1.1 1.- Dabool baahiyahaaga aasaasiga ah
1.1.2 2.- Dabool baahiyahaaga shucuureed
Sidee loo tusaa bisadaada sida aad ujeceshahay isaga?
Sidaa darteed dhammaan baahiyahaaga caafimaad ayaa daboolaya, waa inaad tixgelisaa inay tahay:
Animal: feline, taasi waa, waa qaraabo aad isugu dhow libaaxyada, shabeelka, pumas, iwm, sidaa darteedna wuxuu leeyahay dhaqan la mid ah. Tan macnaheedu waxa weeye inay tahay ugaarsade waqti badan ku lumiya nasashada si uu ugu guuleysto ugaarsigiisa.
Shaqsi: shaqsi ahaan »Waxaan ula jeedaa bisaddaada gaar ahaan, taas oo ah, Tom, Mishi, Luna,… ama magacuu doono ha noqdee 🙂. Bisad kastaa waa mid gaar ah oo aan dib loo soo sheegi karin, sidaa darteed waxay u baahan kartaa kalgacal ka badan kuwa kale, ama waxay jeceshahay inay keligeed waqti badan ku qaadato kuwa kale.
Marka markaan taas ogaanno, waxaan ogaan karnaa sida loo jecel yahay bisadda.
Waa maxay baahiyaha aad qabtaa?
Badanaa waxaa loo maleeyaa in bisadu ay aad uga fududdahay in la daryeelo marka loo eego eeyga, maxaa yeelay uma baahna inay socod ku baxdo iyo inay ka madax banaan tahay oo kale. Runtu waxay tahay in tani ay in badan ku tiirsan tahay. Waa run inaad keligaa kaga tagi kartid guriga 3 maalmood biyo iyo cunto, laakiin haddii uu aad ugu tiirsan yahay, taasi waa, haddii uu jecel yahay inuu la joogo qof aad u badan, waxay u badan tahay inuu yeelan doono qurux badan waqti xun. Kadib, Sidee loo daryeelaa?
1.- Dabool baahiyahaaga aasaasiga ah
Cuntada: Ahaanshaha xayawaan hilib cun ah, waa in lagu quudiyaa, haddii ay suurtagal tahay, cunno dabiici ah, ama taas lagu guuldareysto, quudin aan ku jirin badar ama wax soo saar, maxaa yeelay waxay ku keeni kartaa xasaasiyad iyadoo aysan awoodin inay si fiican u shiiddo.
Biyaha: xayawaan kastaa waa inuu helaa biyo macaan oo nadiif ah maalin walba si uu haraadka ugu bixiyo.
Guriga: ama leedahay saqaf aad ka ilaalin karto dhaxanta iyo kuleylka.
Xoqo- Dabeecad ahaan, waxaad cidiyaha ku fiiqi lahayd alwaaxda iyo laamaha, laakiin guriga waxaad ku sameyn kartaa alaabta guriga. Si tan looga fogaado, waa inaan siino hal ama in ka badan xoqan.
Daryeelka caafimaadka xoolaha: waqti ka waqti waxaa lagama maarmaan noqon doonta in loo qaado dhakhtarka xoolaha si loo baaro loona hubiyo caafimaadkiisa.
2.- Dabool baahiyahaaga shucuureed
Shirkadda: waa inaad waqti badan la qaadataa sida ugu macquulsan, ula ciyaartaa, uguna dareensiisaa inuu runti ka tirsan yahay qoyska.
Aaminaad iyo ixtiraam: waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah. Dhagaxa cad waa inuu ogaadaa inuu ku aamini karo, iyo inaadan si xun u dhaqmi doonin. Ixtiraamku waa lama huraan si wada noolaashaha uu ugu raaxeysto qof walba, marka waa inaad waqti qaadataa si aad u fahamto midkooda luqadda jirka marka waad ogtahay waxa uu isku dayayo inuu kuu sheego marwalba.
Jacayl: wuxuu u baahan yahay in la jeclaado. In kasta oo loo maleeyo inay tahay xayawaan keli ah, runtu waxay tahay mar haddii aad kasbatay kalsoonida kan kale, way u fududahay inay ku raadiso si aad u salaaxdo.
Ku raaxayso shirkaddiisa ... oo ha ku raaxaysto kaaga 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sida loo jeclaado bisad
Sida looga ilaaliyo bisaddaada rashka